Android ဖုန်းအားလုံးပေါ် ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Google Stadia - PX
အွန်လိုင်းဂိမ်းမင်း ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Stadia ဟာ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ကတည်းက စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ Stadia ဆိုတာဘာလဲ
အရင်ဆုံး မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင် Stadia ဟာ ကွန်ပျူတာနဲ့ Console တွေမှာသာ ကစားနိုင်တဲ့ AAA ဂိမ်း (အလန်းဆုံးဂိမ်း) တွေကို စမတ်ဖုန်း ၊ တက်ဘလက် ၊ တီဗွီနဲ့ ဘယ် Display မှာမဆို အလွယ်တကူ ကစားနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ Platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်းဂိမ်းဆိုင်ဆိုပေမယ့် ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်
Cloud Gaming ကို အခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင် Dedicated Hardware (Google Only) ရှိဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကို Starter Kit လို့ ခေါ်ပြီး (ဥရောပမှာ) ဒေါ်လာ ၈၀ နဲ့ အရင်ဝယ်မှ ကစားနိုင်မှာပါ။
Stadia Controller (White) [TechRadar]
ဒုတိယ တစ်ချက်ကတော့ Stadia Subscription Service ပါ။ တစ်လကို ဒေါ်လာ ၁၀ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ဒီတန်ဖိုးဟာ ဂိမ်းအားလုံး ကစားနိုင်တယ်လို့ မရည်ညွန်းပါဘူး။ ပြောချင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ Steam၊ Xbox နဲ့ PlayStation Store တွေမှာ ရောင်းနေသလို ကစားချင်တယ်ဆိုရင် သီးသန့် အခကြေးငွေနဲ့ ဝယ်ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Have Slow Internet? Then forget Stadia!!
စမတ်ဖုန်းနဲ့ ကစားချင်လို့ Stadia ဝယ်မယ်ဆိုရင် စဥ်းစားရမယ့် တတိယအချက်က အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Google အဆိုရ 720p/60fps ကစားမယ်ဆိုရင် 10Mbps ရှိဖို့လိုပြီး Full HD 60fps အတွက်ဆိုရင်တော့ 20Mbps အထက် ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ဒါဟာ Recommended Minimum အနေထား ဖြစ်တဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတာထက် များရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီထဲမှာ Google ထည့် မပြောသွားတဲ့အချက်က Server နဲ့ အရမ်းဝေးနေရင် Latency Issue ကြောင့် Smooth Experience မရနိုင်တာ မမေ့ပါနဲ့။ (ဒီပြဿနာဟာ အသုံးပြုဆဲနိုင်ငံမှာတောင် ကြုံတွေ့နေရပါတယ်)
Free Games on Stadia?
ရှိပါတယ်။ ဒါမယ့် အပေါ်မှာ ပြောသလို တစ်လ ၁၀ ဒေါ်လာတော့ အနည်းဆုံးသုံးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် Free Content တွေကို အသုံးပြုခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိကြေညာထားသလောက်ဆိုရင်တော့ Destiny2နဲ့ Samuria Shodown တို့ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
တခြားဘာ Try နိုင်သေးလဲ?
တိတိကျကျ ပြောရရင် Assassin’s Creed Odyssey ၊ Attack on Titan: Final Battle2၊ Farming Simulator 2019 ၊ Final Fantasy XV ၊ Football Manager 2020 ၊ GRID 2019 ၊ GYLT ၊ Just Dance 2020 ၊ Kine ၊ Metro Exodus ၊ Mortal Kombat 11 ၊ NBA 2K20 ၊ Rage2၊ Red Dead Redemption2၊Thumper ၊ Tomb Raider (ROTR + SOTR) ၊ Trials Rising နဲ့ Wolfenstein: Youngblood တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခုနပြောသလို Stadia Controller ကို ဒေါ်လာ ၈၀ နဲ့ ဝယ်ပြီးသွားရင်တောင် မပြီးသေးပါဘူး။ Stadia မှာ Subscription လုပ်နိုင်တဲ့ Service ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
ပထမတမျိုးက တစ်လကို ၁၀ ဒေါ်လာနဲ့ ကစားနိုင်မယ့် Stadia Pro ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးက ဒေါ်လာ ၁၃၀ ကနေ ၁၇၀ လောက်ထိ Region အလိုက် ကျသင့်မယ့် Founder’s Edition ဖြစ်ပါတယ်။
Founder’s Edition အသုံးပြူသူတွေဟာ Early Access ကို ၃ လ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင် Account Name မှာ Founder Badge ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီး Pro နဲ့ ကွာသွားမယ့်အချက်က Stadia Controller ဟာ နက်ပြာရောင်နဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီခလုတ်ကို သီးသန့်ဝယ်လို့ မရပါဘူး)
ဒီလောက်ဆိုရှင်းပြီ ထင်ပါတယ်။ Stadia ဟာ အွန်လိုင်းဂိမ်းမင်း ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်ပိုင် Content တစ်ခုမှ မပိုင်ဆိုင်သေးပါဘူး။ လက်ရှိမှာလည်း အမေရိကနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတချို့မှာပဲ ကစားနိုင်သေးတယ်။
မိုက်တာက Hardware ပိုင်းလိုအပ်ချက် တစ်ခုမှမတောင်းပေမယ့် အပေါ်မှာ ရှင်းပြထားသလို အင်တာနက် လိုင်းကောင်းဖို့နဲ့ လိုင်းငြိမ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်သွားပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်တုန်းက Pixel Only ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပေမယ့် အခုဆိုရင် Android ဖုန်းတိုင်းမှာ ကစားနိုင်အောင် စမ်းသပ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Already planned to land on Android, Google Says
ပေါက်ကြားလာတဲ့ Device နာမည်တွေက OnePlus 6T , Galaxy S10e နဲ့ Note9 တို့ဖြစ်ပြီး ဒီအဆင့်ပြီးသွားရင်တော့ Apple Device တွေပေါ် ခြေချလာမှာပါ။ ကျနော့်အနေနဲ့လည်း Staida ဟာ လက်ရှိအနေထားထက် ကြီးထွားလာမယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Boderland Franchise ၊ DOOM 2016 & Eternal ၊ Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint ၊ Cyberpunk 2077 ၊ Gods and Monsters ၊ Watch Dogs Legion ဂိမ်းတွေအပြင် ၂၀၂၀ မှာ Publisher Capcom ၊ Electronic Arts (EA) ၊ Square Enix နဲ့ Ubisoft တို့ကလည်း ထောက်ပံ့ဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စောင့်ကြည့်နေပါဦးလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
Source: 9to5Google ၊ TheVerge